दशैँअघि कर्णालीका सबै डिपो चामल ढुवानी गरिने, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
दशैँअघि कर्णालीका सबै डिपो चामल ढुवानी गरिने
सुर्खेत । नेपाल खाद्य संस्थान सुर्खेतले दशैँअघि नै कर्णालीका सबै खाद्य डिपोमा चामल ढुवानी गरिसक्ने भएको छ।
हुम्ला र डोल्पामा हवाई तथा बाँकी जिल्लामा स्थलमार्गबाट संस्थानले सहुलियत दरको चामल ढुवानी गरिरहेको छ। कर्णालीका उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लामा दशैँतिहारका बेला खाद्यान्न अभाव हुन नदिन प्रभावकारी ढुवानी व्यवस्थापन मिलाइएको छ।
संस्थानका सुर्खेत कार्यालय प्रमुख भीम थापाले असोज मसान्तसम्म कर्णालीका २३ वटै डिपोमा चामल ढुवानी गरिसक्ने बताए। पछिल्लो पटक संस्थानको सुर्खेत गोदामबाट मुगुका लागि ६ सय क्विन्टल चामल पठाइएको छ।
हुम्लाका लागि एक हजारमध्ये ५० क्विन्टल चामल हवाई मार्गबाट सदरमुकाम सिमकोट पुर्याइएको छ। प्रमुख थापाले डोल्पामा यस पटक एक हजार ७०० क्विन्टल चामल मौज्दात रहेको बताए।
कालीकोट र दैलेखमा सुर्खेतबाट तथा जाजरकोटमा संस्थानको क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जबाट खाद्यान्न ढुवानी भइरहेको छ। संस्थानले आफ्ना डिपोमार्फत जिरा मसिनो, सोना मनसुली र जापानी चामल सहुलियत दरमा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ।
कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाभित्र सल्यान र सुर्खेत मात्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मानिन्छन्। यी दुईबाहेक बाँकी जिल्लाका सर्वसाधारणलाई वर्षेनी खाद्य संस्थानको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। सुर्खेतमा सर्वसाधारणका लागि खाद्य संस्थान र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले चाडपर्वलाई लक्ष्य गरी सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ।